ब्लग मेरालागि गर्लफ्रेण्ड हो : सुवासकुमार कोइराला 'कुलरिम्स ' - MeroReport
ब्लग मेरालागि गर्लफ्रेण्ड हो : सुवासकुमार कोइराला 'कुलरिम्स '
सर्लाही तिनघरियाका सुवासकुमार कोइराला काठमाण्डौंको एक निजी फर्ममा साझेदारी लगानीका साथ कार्यरत हुनुहुन्छ । सामाजिक संजाल बिशेषगरि ट्विटरमा कुलरिम्सका नामले परिचित एवं सक्रिय कोइराला आफुलाई 'सदाबहार कुलरिम्स' को रुपमा चिनाउन चाहनुहुन्छ । रमाईलो र मनोरञ्जनका लागी ट्विट गर्छु भन्ने सुवासले आफ्नो ब्लग Subaxलाई भने आफ्ना ट्विटभन्दा अली गहन सिर्जनाहरु पोख्ने माध्यम बनाउनुभएको छ । यीनै आफुलाइ 'कुलरिम्स' भनेर आफुलाई चिनाउन चाहने सुवासकुमार कोईरालासंग मेरो रिपोर्टको नियमित स्तम्भ साताका ब्लगरका लागि पवन न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ सोही कुराकानी :
वास्तविक जिवनको सुवास ट्विटर लगायतका सामाजिक संजालमा कुलरिम्स बन्नुको कारण के हो?
आकाश र जमिनको फरक छ । वास्तविक जीवन र साथीभाइसंग विताउने जिवन फरक छ खै किन हो थाहा छैन । मलाइ यो नाम अरु कसैले दिएको हो ।
ब्लग लेखन कहिलेबाट सुरु गर्नु भएको हो?
२ वर्षजति भयो होला ।
आफ्नो ब्लग Subax को बारेमा शब्दचित्र प्रस्तुत गरिदिनुस् न।
यो मेरो ब्लग मेरो साथी पुजारीले बनाइदिएको हो । पछि मनमा लागेको कुरा लेख्ने थलोको रुपमा लिएको छु । दुई पटक त परिवारसंग झगडा नै भैसक्यो ब्लगको कारण ।
टाइम पास गर्न ।
यो नै भन्ने नै छैन । चाखलाग्दा र मनछुने जस्तासुकै बिषयबस्तु म हेर्नेगर्छु ।
अरुका ब्लग कत्तिको पढ्नु हुन्छ?
समयले भ्याएसम्म हेर्छु ।
लिंक कहाँबाट लिनुहुन्छ वा खोज्नुहुन्छ?
ट्विटर, फेसवुकबाट ।
विशेष गरी कस्ता विषयवस्तु समेटिएका ब्लग तपाईँका रोजाइमा पर्छन्?
समाचार र मनोरञ्जन दिने खालका ब्लग मलाई मनपर्छ ।
ब्लग लेखन वा ब्लगमा समेटिएका सामग्रीसँग जोडिएका कुनै रमाइला घटना छन् कि ?
अँ छ । एउटा ब्लग लेखेको थिएँ त्यही कारण श्रीमति संग ३ दिनसम्म बोलचाल भएन । पछि आफैले डिलिट गरेर माफी मागेँ ।
तपाईँको ब्लगका भिजिटर कति छन् ?
खै ५ - ६ हजार जति होलान ।
ब्लग, ट्वीटर र फेसबुकमा के फरक पाउनु भयो ?
ब्लग मेरो लागी गर्लफ्रेण्ड हो भने फेसबुक जेठी श्रीमति अनि ट्वीटर कान्छी श्रीमति हो ।
ब्लग, ट्वीटर र फेसबुक यी तिनमध्ये कुनमा बढी रमाउनुहुन्छ र किन ?
ट्विटर अर्थात, कान्छी श्रीमतिसंग । कान्छीलाई म धेरै माया गर्छु र उनले पनि त्यसैले ।
तपाईंका ट्विटहरु प्रायजसो उत्ताउला किसिमका आउँछन् तर ब्लगमा भने रमाइला र गहन सामग्री रहेछन् । किन दुई फरक प्लेटफर्ममा फरक उपस्थिती तपाईको?
गर्लफ्रेण्डसंग गरिने ब्यवहार र कान्छी श्रीमतिसंग गरिने ब्यवहार फरक भैहाल्छ नि त्यहीभएर (हा...हा )
तपाईंका ट्विटलाई कतिपयले अश्लिल भन्छन्, ब्लगका कविता हेर्ने हो भने प्रतिकात्मक देखिन्छ । तपाईंलाई 'अश्लिल ट्विटे' भन्नेलाई के भन्नुहुन्छ?
मलाई 'अश्लिल ट्विटे' भन्नेहरुलाई मलाई ब्लक गर्न आग्रह गर्छु । यसमा मेरो कुनै गुनासो र दुखमनाऊ हुनेछैन ।
अनि टाइमलाइनमा उत्ताउलो देखिने कुलरिम्स वास्तविक जिवनमा कत्तिको उत्ताउलो छ?
आकाश र जमिनको फरक छ ।
ब्लग लेखनका बारेमा आचारसंहिताको कुरो पनि बेलाबेलामा आउने गर्छ, तपाईंलाई के लाग्छ जरुरी छ आचारसंहिता?
नियम बन्नु राम्रो कुरा हो तर कसैको नितान्त आफ्नो भावना लेख्न रोक लगाउनु हँदैन ।
अरुका ब्लगहरु हेर्दा कत्तिको पालना भएको पाउनु भएको छ आचारसंहिता?
मैले त्यता त्यतिसारो ध्यान दिएको छैन ।
छ जस्तो लाग्छ ।
पछिल्लो समय सामाजिक संजालहरुबाट सकरात्मक प्रयासहरु भएका उदाहरणहरुपनि छन् र तीनको दुरुपयोग गर्ने र गलत सन्देश दिने जस्ता नकरात्मक कामका लागीपनि प्रयोग भैरहेका छन् । कसरी हेर्नुहुन्छ यो कुरालाई?
सकारात्मक कार्य त राम्रो हो नि ! जस्तो TFCNepalको माध्यमबाट भेटघाट गर्ने, सामाजिक कार्यहरुमा सहभागी हुने यस्ता प्रयासहरु सकरात्मक हुन्। तर यसको दुरुपयोग चैं गर्नुभएन। जस्तै मैले जसरी रक्सी खाएर अरुलाइ फोन गरेर सताउनु चैँ भएन भन्ने हो ।
तपाईँको सबैभन्दा बढी रुचाइएको ब्लग?
मलाइ चैं 'प्यारी कुचे' हो भने अरुले चै 'ट्वीटर परिषद' भन्ने ब्लग बढी रुचाएको पाएँ ।
ब्लगबाट के पाउनुभयो, के गुमाउनु भयो?
खै केही गुमाएको जस्तो लाग्दैन बरु साथीभाइको प्रतिकृया पाइरहेको छु, जुन मलाइ धेरै मनपर्छ ।
ब्लग लेख्न चाहने र लेखिरहनुभएकाहरुलाई के सन्देश दिनु हुन्छ ?
निरन्तरता दिनुहोस भन्न चाहन्छु । मैले जस्तो अल्छी गर्नु भएन भन्न चाहन्छु । विशेषगरि पुजारीको ब्लग मिस गरिरहेको छु ।
अन्त्यमा केही छ सोध्न छुटाएको तपाईलाइ भन्न मन लागेको कुरा?
म भन्दा खत्रा-खत्रा ब्लगरहरु बजारमा हुँदाहुँदै मेरोरिपोर्टले मलाई किन 'ब्लगर अफ दि विक' बनाएको होला भन्ने पनि लागिरहेको छ । तरपनि, मेरो रिपोर्ट मलाइ मनपर्छ । एक पटक काकाबा लाई 'ब्लगर अफ द विक' बनाउँदा राम्रो बहस गराउन सफल भएको थियो मेरोरिर्पोटले । जे होस, अव धन्यवाद भन्न चहान्छु । सफलता चुम्दै जाओस्।
Comment by Lava Kafle on April 12, 2013 at 3:43pm
Comment by एसवी गौतम on April 11, 2013 at 11:54am
म त छक्कै परेनी । तपाईको खास नाम यहाँवाट पो थाहा भयो, फोटो पनी धेरै फरक रैछ । अन्र्तवार्ता पढेर रमाईलो लाग्यो । "व्लगर अफ दि विक" वन्नुभएकोमा वधाई छ ।
Comment by Binaya Shekhar on April 10, 2013 at 4:10pm
Congratulations Subash jee!
Comment by Umesh Sigdel on April 10, 2013 at 3:07pm
धेरै धेरै बधाइ छ । ज्वाइ साप । अब ब्लगर अफ र विक भएसी त प्यालो को च्या खान आउनु पर्ला जस्तो छ ।
Comment by pawan neupane on April 10, 2013 at 2:14pm
साताका ब्लगर बन्नुभएकोमा दाजु @cooolrims लाई हार्दिक बधाई :) @meroreport
Comment by Amuna Chapagain on April 10, 2013 at 1:09pm
बधाई छ है दाइ
Comment by Pagal Basti on April 10, 2013 at 12:53pm
बधाइ छ सुवास कोइरालालाई। अब त पैंचो तिर्ने होला नि :D
Comment by Prakash Lamichhane on April 10, 2013 at 12:53pm
लौ बधाइ छ साताका ब्लगर कुलरिम्सलाइ । :) ब्लगहरु निरन्तर पढ्न पाइयोस यहाँ भनिएझैँ साँच्चीकै अल्छी भएझैँ लाग्यो है । :D